Guddoomiyaha Golaha Shacabka Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya Mudane Maxamed Sheekh Cusmaan (Jawaari) iyo Danjiraha Turkiga u fadhiya Soomaaliya Olgan Baker oo xalay ku kulmay magaalada Muqdisho ayaa kawada hadlay xoojinta iskaashiga Baarlamaanada labada Dal.
Kulanka waxaa goob joog ka ahaa guddoomiye ku xigeenka labaad ee Golaha Shacabka Mudane Mahad Cabddalla Cawad, waxaana ay kawada hadleen mas’uuliyiintani iskaashiga Baarlamaanada labada Dal iyo mataanaynta guddiyada labada baarlamaan.
Mudane Maxamed Sheekh Cusman (Jawaari) Guddoomiyaha Golaha Shacabka ayaa sidoo kale Safiirka Turkiga u fahdiya Soomaaliya kala hadlay sidii loo dedejin lahaa dhismaha xarunta Baarlamaanka Soomaaliya oo ay kal hore balan qaadeen.
Guddoomiye ku xigeenka labaad ee Golaha Shacabka Mudane Mahad Cabdalla Cawad ayaa warbaahinta Qaranka uga warramay waxyaabihi kulankasi ka soo baxay.
“Guddoomiyuhu wuxuu safiirka kala hadlay arrimaha iskaashiga baarlamaanada labada dal, mataanaynta guddiyada labada baarlamaan, sidoo kale safiirka wuxuu warbixin ka siyay guddoomiyaha qorshaha dhismaha xarunta golaha shacabka, waxaana la isku afgartay in dhismo KMG ah laga sameeyo xarunta Villa Harggeysa, halkasi oo lagu shaqeynayo dhismaha xarunta baarlamanka ilaa 6 bilood ayay qaadanaysaa, ilaa intaasi halkan ayaa lagu shaqeynayaa”, Ayuu yiro mudane Mahad Cabdalla Cawad.
Previous articleMaamulka G/ Banaadir oo daahfuray Wajiga 1aad ee Barnaamijka shaqo abuurka Dhalinyaradda
Next articleMadaxweyne ku xigeenka Jubbaland oo booqday deegaanka Goobweyn